Xog: ku saabsan sababta ay dawlada Eritrea u xidhatay xadka Itoobiya kala dhexeeya. – Xeernews24
Xog: ku saabsan sababta ay dawlada Eritrea u xidhatay xadka Itoobiya kala dhexeeya.
27. Dezember 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Mudo kabadan 24-saacadood waxaa xidhan xadka ay wadaagaan dalalka Eritrea iyo Itobiya kadib markii Kumanaan ciidamada Eritrea ah, ay subaxnimadii Hore ee shalay ku Waabariista deegaamada dhaca xadka Labada dal.
Dawlada Eritrea ma shaacinin sababta ay xadkeeda u xidhatay waxaa se Jira xogo Rasmiya oo sheegaya in Eritrea Go’aansatay inay xakamayso bixitaanka dadka oo sidii Fatahaadii oo kale xadka uga Gudbaya, isuna dhiibaya Qaxootinimo si ay u Helaan Nolol dhaanta midii dalkooda.
Xogtan waxaa ay sheegaysaa in Eritrea kala Hadashay xukuumada Abiy dib usoo celinta dadka dalkiisa sida xad dhaafka ah u Galaya, kuwaasi oo intooda badan kusugan deegaamada Tigreega Axmarada Oromada iyo Addis ababa, balse dadkaasi waxay Qaab Qaxootinimo isaga diiwaangaliyeen xarumaha Hay’ada UNHCR-ta, taasi oo cadho Galisay xukuumada madaxwayne Isias Afewerqi.
Arinta kale ee xukuumada Eritrea ka cadhootay ayaa ah warbixin Todobaadkii Hore midowga Yurub uu kusheegay in kudhowaad 30-kun oo Eritrean ah Itobiya magangalyo waydiisteen, kuwaasi oo Haatan ay Hay’adaha Qaramada midoobay xaalkooda Gacanta kuhayaan.
Waxaa kale oo Jira in mamulka Tigreega oo ka Faa’iidaysanaya xuduuda Furan iyo Heshiiska aan cagaha adag ku Taagnayn ee Labada dal ay Galaangal Jaajuusnimo kuyeesheen Gudaha Eritrea, ayna Khal-khal siyaasi ah iyo Kharbudaad kagaysan karaan, taasi oo sida lasheegay ay xukuumada Eritrea ku baraarugtay Halisteeda maadaama aysan Tigreegu Heshiiska Qayb ka’ahayn
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/12/xadka.jpg 720 1280 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-12-27 17:57:292018-12-27 17:57:29Xog: ku saabsan sababta ay dawlada Eritrea u xidhatay xadka Itoobiya kala dhexeeya.
Ethiopia Iyo Eritrea Ciidamadooda Ayaa Badali Doona Amisom”Africa Intelli... Maleeshiyada is maamulka Canfarta ayaa mar kale dagaal culus ku soo qaaday magalada...